04/05/2012 Tao Toliara renivohitry ny Faritra Atsimo Andrefana no nampiantrano ny fankalazana nasionaly ny andro iraisam-pirenena ho an�ny fahalalahan�ny asa fanaovan-gazety.
Tamin’ny omaly koa no nametrahana ny ivontoeran’ny asa fanaovan-gazety ao Toliara izay ny PNUD no niantoka azy. Mpanao gazety niisa 120 amin’ny lafivalon’ny Nosy no tonga tany an-toerana izay nanamarika nandritra ny adihevitra manodidina ny tontolon’ny asa fanaovan-gazety fa sarotra tokoa ity asa ity. Betsaka no mitondra faisana eo am-panatanterahana ny asany, ao ny sakantsakana samihafa avy amin’ny tomponandraiki-panjakana sasany sy ireo mpanao politika ankoatra ny olana ara-pitaovana. Samy nahatsapa anefa ny rehetra fa fanoitra sy fototry ny fampandrosoana sy ny demokrasia ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety ka tokony hatao laharam-pahamehana. Niantso ny firaisankinan’ny mpanao gazety kosa ny minisitra Rahajason Harry Laurent raha nanomboka ny fandraisam-pitenenany.
Nolazainy indray avy eo fa arovana ny fampiroboroboana ny asa fanaovan-gazety nefa tsy maintsy manaraka ny lalàna velona. Ny fanidiana radio sy televiziona, hoy izy dia fanadiovana mba hisian’ny fampanaraham-penitra. Niangavy koa ny tenany mba ho mendrika sy feno fandeferana amin’ny fanatanterahana ny asa ny mpanao gazety ho voninahitry ny asa fanaovan-gazety. Fotoanan’ny fanehoan-kevitra sy fitondrana ny anjara biriky izao ho fanoitry ny fanovana ny fiarahamonina na dia samy hafa aza ny fenitry ny tsirairay raha ny nambarany hatrany.